Puntland oo fasaxday shaqaalaha xili uu socdo diyaar-garowga 15 sano guuradii maamulka (Dhegeyso) – Radio Daljir
Luulyo 31, 2013 4:38 b 0
Garoowe, July 31, 2013 – Wasaarada shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland ayaa maanta iclaamisay fasaxa shaqaalaha dowladda iyo kuwa gaar ah ee Puntland, xili uu socdo diyaar-garowgii ugu dambeeyey ee munaasabada 15 sano guurradii ka soo wareegtay asaaska maamulka.
Wasiirka shaqada iyo Shaqaalaha Puntland Cabdiweli Xirsi Cabdulle (Indha-Guran) oo war-baahinta kula hadlay Garoowe ayaa shaaciyey in maalinta Berri ah oo bishu tahay 1Augost ay fasax yihiin dhamaan shaqaalaha.
Munaasabada 1 August, oo sanadkan ka duwan sidii hore ayaa la filayaa in ka dhacdo xaruunta Madaxtooyada Garoowe iyo meelo khaas ah, halka sanadihii hore lagu xusi jiray Fagaare ay dadweynuhu ka qeyb geli jireen, taasna maamulku wuxuu sanadkan ku saleeyey xaaladaha siyaasadeed ee Puntland ka jira iyo shaqada oo badan.
Puntland waxay sheegtay in fasaxa shaqaalaha uu ku salaysan yahay maalinta Aasaaska maamulka, Mudane Indha-guran wuxuu si rasmi ah u sheegay in maalintaasi ay tahay maalin farxadeed oo xusuus iyo qadarin ku leh bulshada reer Puntland, loona baahan yahay in dadku ay jaanis helaan.
Halkan hoose ka dhegeyso hadalka wasiirka shaqada iyo shaqaalah Puntland (Indha-guran)